Usuku okuwela ngalo isibhakabhaka: uthando ifilosofi esibayeni sikaMegan Maxwell | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | I-Biography, Amabhuku, Inoveli yezothando
Mhla isibhakabhaka siwela (2016) yinoveli yiSpanish María del Carmen Rodríguez del Álamo -isayinwe ngaphansi kwegama elingelona igama elithi Megan Maxwell-. Umdlalo uveza indaba ehambayo yabangane abambalwa, abathi kusukela ebuntwaneni bakha isibopho sobuzalwane esingenakwephuka. Umbhali ugxile ekuboniseni esakhiweni eminye imibono yothando lweqiniso ( ifilosofi), ngemigqa egcwele imizwa nemizwa ejulile enothisa umoya.
UMaxwell wakhe umsebenzi oqinile emibuthanweni yezincwadi enamanoveli angaphezu kwama-40. nezindaba eziyisikhombisa, umsebenzi asewuthole imiklomelo eminingi. Ukhethe ukuhlekisa ngothando, yize esezamile en abanye izinhlobo, njenge iphuphu likhanyisiwe kanye nezocansi. Kokugcina kugqamile Ngibuze noma yini oyifunayo (2012), indaba yokuqala evusa inkanuko ayichazayo nokuthi i-saga yaqala kanjani Ngibuze.
1 Isifinyezo Sosuku I-Sky Falls
1.1 Ukuhlangana kokuqala
1.2 Ubungani obukhulu buyazalwa
1.3 Izinguquko ezinkulu
1.4 Konke kuqala phansi
2 Ukuhlaziywa kosuku okuwa ngalo isibhakabhaka
2.2 Imizwa eminingi
2.3.3 Ezinye izinhlamvu
Isifinyezo Sosuku I-Sky Falls
Alba uyintombazane eneminyaka eyisikhombisa, ngubani, lapho ubuyela ekhaya ehamba nonina —uTeresa—, uzithela phezu kwezimpahla zasendlini ezahlukahlukene emnyango wesakhiwo. Lapho uqeda ukukhuphuka izitebhisi, bheka ingane edabuke kakhulu, namehlo avuvukile ngenxa yokukhala. Umfana igama lakhe uNacho, uphila nentombazane futhi usanda kungena nabafowabo - uLuis, 11, noLena, 4 - emzini wakwaRededio ongumakhelwane.
Imangele, intombazane iqala ukuxoxa ngendlela enobungane noNacho, ulayini le uyavuma ukuthi ulahlekelwe ngabazali. U-Alba, eshukunyiswa yilokho akushoyo, umtshela ukuthi angaya ukuyodlala endlini yakhe noma nini lapho ethanda. Kamuva, abakwaRemedios bavuma ukuvakasha ukuze umzukulu wakhe ajabule kancane. Lapho, utshela uTeresa ngengozi edabukisayo lapho kushone khona indodakazi yakhe nomkhwenyana wakhe, abazali bezingane ezintathu.
Ngalesi sikhathi, ukulandisa kudlula ezikhathini ezibucayi kakhulu. Phakathi kwemigqa, U-Alba utshela uNacho ukuthi abazali bakhe bangaba ngabakhe, futhi bathembisana ubungane bempilo yonke.
Ngosuku isibhakabhaka ...
Ubungani obukhulu buyazalwa
Ngemuva kwalokhu okwenzekile, lezi zingane ezintathu zashiywa ziphethe ugogo wazo omnandi uRemedios, ukusondelana okufaka isandla ekutheni uNacho no-Alba bahlukane futhi bahlanganise ubungani obungenakwephuka. Ngesikhathi seminyaka yamashumi ayisishiyagalombili, bobabili bayeke ukuba izingane futhi baguquke ndawonye babe ngabantu abadala. Bakhule bewumndeni omkhulu, kanti nabantu abasha, ngaphezu kwabangane, sebevele bekhona babefana nabafowabo.
U-Alba noNacho gcina ubuhlobo obuseduze, njalo uthembele kokuhle nokubi. Bobabili bafuna ukuthatha igxathu eliya phambili ezimpilweni zabo, y ikhona nini isibopho esijulile yobungani phakathi kwabo kuthintekile. U-Alba uthandana uhlanya lomuntu, kuze kufike ezingeni lokungaboni emehlweni ezicini ezahlukahlukene. Isihloko siyalawula, futhi sifuna ukumqhelelanisa nomndeni wonke, ikakhulukazi kumngani wakhe amthandayo.
Noma kunjalo UNacho uyamxwayisa Ukuntwela kokusa ukuthi lo muntu ukubangela, Pero yena ayilaleli, futhi ekugcineni uyashada. Umyeni wakhe umyisa eMadrid, umhlukanisa nawo wonke umuntu; ngaleso sikhathi, uNacho unquma ukuthola enye indlela futhi uthuthela eLondon. Lapho, inhlanhla yakhe ibonakala ishintsha lapho ehlangana nomlingani wakhe womphefumulo, kepha injabulo ayihlali isikhathi eside, ngoba lowo muntu ubulawa ukugula okuyinqaba.
Konke kuqala phansi
Ngemuva kwesahlukaniso sakhe, u-Alba unquma ukuya eLondon ukuhlangana kabusha nomngani wakhe omkhulu, ngaphandle kokusola nokuthi ubhekene nani. Lapho ufika, umthola engenalolo kumamatheka futhi ecwebezela emehlweni akhe lokho kwasho lokho. Lapho bebonana, bobabili bazizwa benomuzwa ojulile. Uyakwazi ukumkhipha kulowo mfanekiso ocindezelayo futhi bavuselele ubuzalwane babo, kepha kungekudala bathola iqiniso elibi elibabeka esivivinyweni.
UNacho utholakala enesifo esaziwa kancane esidale umonakalo omkhulu ngaleso sikhathi. Kumele siphephele, ngoba baqinisekisa ukuthi iyathathelana kakhulu futhi iyabulala, ngaphezu kwalokho, ayinakho ukwelashwa okuphumelelayo. U-Alba akamlahli umngani wakhe futhi ikukhuthaza nsuku zonke ukuthi uqhubeke. Phakathi nalokho, uthando luphinde lungqongqoze eminyango yenhliziyo ka-Alba, ngabe lokhu kungukukhanya akudingayo lapho ebhekene nobumnyama obungaka?
Ukuhlaziywa kosuku okuwa ngalo isibhakabhaka
Mhla isibhakabhaka siwela iyinoveli yothando ebekwe phakathi kweSpain neLondon, inamakhasi angama-416 ahlukaniswe ngezahluko ezinde ezingamashumi amathathu nantathu. Indaba iqala ngonyaka we-1974, lapho abalingisi bayo behlangana okokuqala, bese iqhubeka ngeminyaka engama-80-90. Ilandiswa kumuntu wesithathu, ngolimi olulula, olunikeza ukufundwa okushelelayo nokujabulisayo..
Lokhu kulandisa kugcwele imizwa ejulile, kungukuguquguquka kwemizwelo. Injabulo nosizi kuyabonakala, kepha futhi kunethemba elikhulu lapho ubhekene nobunzima. Ngokufanayo, uthando lukhonjiswa ngaphezu kwalezi zithandani (the ifilosofi), ehlanganisa umndeni nabangane. Emigqeni yakhe, umbhali uzwakalise ngalokhu: "Igazi likwenza ube yisihlobo, kepha ukwethembeka nothando kuphela kukwenza umndeni."
Ungowesifazane omuhle, ijabule, ifundile, indodakazi enhle, umngani omuhle nenhliziyo enhle. Ngenxa yobudlwangudlwangu nokuthandana kwakhe, uthathwa ngumuntu omubi, futhi Kufanele avuthwe ngokuzumayo ngemuva kokwehluleka komshado. Uphuma kuleso simo eqinisiwe, okuzobaluleka ukweseka umngani wakhe omkhulu, uNacho, amthandayo ngaphandle kwemibandela.
Es indoda ephilayo futhi ephumayo, iyakuthanda ukujabulela impilo yayo ngokugcwele. Ngemuva kokuphazamiseka njalo lapho efuna umlingani, wacishe wawushiya lo mbono, kepha uhambo oluya eLondon lumenza aqondane nomlingo ngomlingo. Kusukela ebuntwaneni, Ungumngane othembekile ka-Alba, umthanda kakhulu futhi kukuye ukuthi uziveza njengoba enjalo. Yize ehlushwa ukugula okunegazi ekugcineni, akalahli ithemba futhi afune ukulidlulisela kubo bonke abathandekayo bakhe.
Abalingiswa abakule noveli bangabantu bansuku zonke, abajwayelekile futhi abanemizwa emihle. Wonke umuntu, Kokubili okuyisisekelo nokwesibili, ukugcwalisa indaba nokuletha ubuzalwane namanani abalulekile. Ngaphezu kwabalingiswa abaphambili, ukubamba iqhaza kogogo, uBlanca noRemedios; komzali. UTeresa noJosé; nabafowethu, uLuis noLena.
Kule ndaba, UMegan maxwell sichaza ngobuqili nangobuchwepheshe isifo esidlule nemiphefumulo eminingi eSpain. Ngalokhu, umbhali ukhombisa ubuqiniso besikhathi nokuthi umphakathi ubhekane kanjani nalesi simo, ngoba isikhathi eside bekuthathwa njengokungekho emthethweni.
UMaria del Carmen URodriguez we-Alamo ezelwe ngoLwesihlanu, ngoFebhuwari 19, 1965 eNuremberg, eJalimane; ubaba wakhe ungowaseMelika futhi ungowakhe umama waseSpain. Lapho esenezinyanga eziyisithupha kuphela ubudala, unina wanquma ukubuya naye eSpain. Kusukela lapho, usehlale emadolobheni amaningana kuleli, njenge: Barcelona, ​​Cádiz neMadrid, yingakho enobuzwe baseSpain.
Ngemuva kwenkinga yezempilo nendodana yakhe, wanquma ukuthatha umhlalaphansi emsebenzini wakhe ukuze ayinakekele ekhaya. Lapho, Uqale isifundo sezincwadi online futhi waqala ukubhala amanoveli amaningi ngaphansi kwegama lomgunyathi elithi "Megan Maxwell." Ngemuva kweminyaka engaphezu kweyishumi yokuhlelwa okungekuhle, ngo-2009 ukulandisa kwakhe kokuqala kwamukelwa: Ngikutshelile, kwathi ngo-2010 wawina iSeseña International Romance Novel Award.
Kusuka lapho, Umbhali akayekile, ushicilele amanoveli angama-45 lapho afaka khona amasaga amathathu: Amaqhawe uMaxwell, angibuze y Ukuqagela. Kuwebhusayithi yakhe, uyavuma: “Ngithanda ukubhala amahlaya othando futhi ngishicilela izinhlobo ezahlukile njenge iphuphu likhanyisiwe, wesimanje, wasendulo, ukuhamba kathathu y inkanuko”. Leyo nhlanganisela yezitayela ibonakalise umsebenzi ophumelelayo wokubhala waseSpain.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Izinhlobo » Inoveli yezothando » Mhla isibhakabhaka siwela